Maalinta caalamiga ah ee degaameynta | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / Maalinta caalamiga ah ee degaameynta
Posted by: Ahmed Haaddi October 4, 2021
Himilo ­– Maalinta caalamiga ah ee deegaameynta waxaa sanad kasta la weyneeyaa bisha October si dhammaan muwaadiniinta dunida loo xasuusiyo masuuliyadooda ku aadan qaabeynta magaalooyinka mustaqbalka.
Maamuus sanadeedka deegaameynta, si guud waxaa hoosta looga xariiqaa oo nal lagu ifiyaa xaaladaha ay ku sugan yihiin magaalooyinka, tuulooyinka iyo caasimadaha oo kuwo badan ay wajahayaan culeysyo.
Sidoo kale maalintan, waxaa muhiimad gaar ah la siiya sidii dadyowga dunida oo idil ay u heli lahaayeen hoy wanaagsan. Waxaa la far muuqaa xuquuqda aasaasiga ah ee sheegaysa lama huraanimada in gabaad la wada helo.
Sida laga oo xigtay qaramada midoobay qiyaastii 1.8 bilyan oo ruux waxay ku nool yihiin nolol hooseysa, waxay deggan yihiin xaafado iyo guryo isku raran ah oo aysan ka jirin nadaafad iyo daryeel kale-toona.
Dhibaatada hoy la’an ayaa ah midaan ku ekeyn keliya meelaha isku raranta ah balse casimadaha waxaa ku nool dad badan oo aan haysanin guryo ay seeexdana kuwaas oo hoy ka dhigta derbiyada iyo buundooyinka.
Tirada dadka hoy la’aanta ah ayaa korodhay taniyo soo ifbixii safmareenka Karoona, qoysas badan ayuu COVID-19 saameeyay ilahoodii dakhliga kuwaas ooo awoodi waayay inay iska bixiyaan kirada guryaha kadib dibad yaal noqday.
Sida ay sheegtay qaramada midoobay xaafadaha isku raranta ah kama jiraan hab raacyada looga hor tago cudurka Karoona, sidaas darteed waxay hay’addu sheegeysaa inay sii kordhi karaan dadka xanuunka halista ugu jira.
Hoyga iyo degaanka oo dadka muhiim u ah, waxaa la soo jeedinayaa inay dadku wada helaan, marka xigta in degaanka la degayo uu noqdo mid cagaaran, waasac ah, fursado shaqo ay ka jiraan, leh iskuulo, xarumo caafimaad iyo adeegyo kale.
Sannadkan waxaa hal ku dheg loo qaatay in magaalooyinku ay noqdaan kuwo ka madax bannaan waskhowga, boqolkiiba 70 magaalooyinka ayaa masuul ka ah wasakhwoga maanta dunida saameeyay.
Gaadiidka, dhismoooyinka, iyo warshadaha tamarta waxaa loo arkaa in maareyntooda la iska saaro xil weyn iyadoo aan laga tageynin maareynta qashinka. Markii ugu hoorreysay maalintan waxaa la xusay 1986 waxaa hal hays laga dhigtay xilligaa hoygu waa xuquuqdeyda.
Dalal badan ayaa maalintan xusa, waxay tilmaamaan dhibaatada ka dhalatay magaalooyinka degdegga ku sameysmay iyo saameynta ay ku yeesheen degaanka iyo aadanaha.
Inta ay socdaan munaasabadaha maalintan, waxaa la sahmiyaa sida ay dawladaha iyo ururada ku shaqada leh uga wada shaqeynayaan dedaalka ku qotoma helidda degaan ka fayow wasakhow.
Previous: Watford oo shaqadii ka eriday tababaraheeda
Next: Mo Salah oo shuruud ku xiraya inuu saxiixo heshiiska cusub ee Liverpool